Pulse 3D: ndeapi epamusoro maPS5 mahedhifoni akakosha? | Gadget nhau
Isu tinoramba tichiongorora zvakadzama zvishongedzo zvakaunzwa PS5, tinokuyeuchidza Isu tichangobva kuyedza iyo DualSense chiteshi chechaji, icho isu chatakawana kuva chinobudirira chose kubva kuna Sony. Ino nguva isu ticha taura nezve chigadzirwa chinogona kuita mutsauko mumitambo yedu uye kuve shamwari yedu yepamoyo.
Isu takanyatso kuyedza iyo nyowani Pulse 3D, yepamutemo PS5 mahedhifoni anotora mukana wezvese 3D kurira kugona iyo Sony yakazivisa nemufaro mukuru kubvira pakatangwa PlayStation 5, usarasikirwe nechero dudziro mune ino chaiyo yekuongorora pamwe neunboxing inosanganisirwa.
Sezvazvakaita pane dzimwe nguva zhinji, isu taperekedza ongororo iyi yevhidhiyo pane yedu YouTube chiteshi uko iwe uchakwanisa kuona unboxing uye zvirimo mubhokisi, kufananidzwa neyekare PS4 Goridhe uye chaiyo-nguva tarisiro yekuti iyo Inopindirana zvinodzora paPS5, saka inguva yakanaka yekujoinha nharaunda yeActualidad Gadget nekunyorera kuchiteshi chedu, zvirokwazvo uchawana mavhidhiyo anonakidza uye nenzira yekutisiira iyo Kufanana kutibatsira kuramba tichikura nekukuunzira yakanakisa internet ongororo.
Wakavada here? Zvitenge iwo pamutengo wakanakisa muIYI LINK.
1 Dhizaini uye zvigadzirwa: Kugamuchira iyo PS5 theme
3 Kushanda uye kugadzirisa
Dhizaini uye zvigadzirwa: Kugamuchira iyo PS5 theme
Zviri pachena kuti Sony yasarudza iyo PS5 maviri-toni kune idzi Pulse 3D. Mashoko acho anoshamisika zvakare sezvakaitika panguva iyoyo neDualSense, uye ndizvo zviri mukati, kunyangwe munzvimbo yekutsigira, tinowana marogo emutongi wePS5 muhukuru hwemamilimita.
Matt uye chena mapurasitiki ekunze, ichisiya kusviba kwekupenya uye nhema-ganda reGoridhe raivepo paPS4. Kune chikamu chayo, mahedhifoni haachadzoreke senge mune ese apfuura mamodheru, isu tinoenderera kune yakapusa asi yakagadzikana mashandiro.
Yakapetwa silicone musoro bhanhire rinotambanudza kuti rikwane musoro wedu, isu hatifanire kuzvigadzirisa, asi ivo vachazviitira isu. Ini ndinofanira kureurura kuti maawa ekutanga ekushandisa akandiita kuti ndisanzwisisike, asi zvinopera kuzvipa zvoga uye kuchinjika kune kuravira kwedu munguva pfupi.
Zvinotaridzika senge iko kutonhora kwemavara kuri kune mamwe maPS5 accessories zvakare, kwete chete DualSense controller? pic.twitter.com/HPzev8N7cP
- PlayStation 5 - PS5 Restock Nhau (@ PS5Updates) November 10, 2020
Special kutaurwa chete 229 gramu yehuremu izvo zvinobatsirawo mune izvi zvese. Zviri pachena kuti ivo havanzwe zvakare "premium", kunyanya tichifunga mutengo, asi zvakare Sony akaveketa nezvayo maererano nedhizaini, uye ndiyo poindi yekuti ivo vanoramba vachikora.
Sezvazviri mushanduro dzayo dzese, aya maPS5 mahedhifoni haasi Blueooth, ane USB transmitter inoenderana nePC, macOS uye PS4 izvo zvinoita kuti zvive zvisina waya uye zvinotiponesa chero mhando yekucheka kana kudimbura. Isu tinongobatanidza iyo USB inotumira kune iyo konia (Ini ndinokurudzira USB kumusana) uye kana iwe ukavhura iyo Pulse 3D vanozozvibatanidza otomatiki.
Kune chikamu chayo, ine zvakare ine yekukwirisa chiteshi USB-C, pakupedzisira kusiya kumashure microUSB iyo yatipa dambudziko rakawanda, uye 3,5mm jack kana tichida kuvashandisa chero chinhu chipi zvacho kana kunyangwe neDualSense iri kure pachayo.
40mm madhiraivha ane 3D maitiro
Bhatiri harizove dambudziko nekuda kwenzira idzi, sezvo zvisiri kuzoitika kazhinji kana tichifunga kuti zvinotipa maawa anosvika gumi nemaviri ekuramba uchitamba. Mukuyedza kwedu mhedzisiro yacho yakasimbiswa uye mukushandisa kwakasanganiswa kwemaikorofoni uye kurira pazwi rakakwira takawana kwakatenderedza maawa gumi.
Tenga Sony Pulse 3D nemutengo wakanakisa mu AMAZON.
About Zvichatitorera awa kuti tivabhadharise kuburikidza ne USB chiteshi che PlayStation 5 pachayo uye mu "Kurara" maitiro. Hatina zvichemo nezve kuzvimiririra kutaura chokwadi, kunyangwe kusashandisa Bluetooth ndizvo zvazvinazvo.
Kushanda uye kugadzirisa
Kusiyana neGoridhe (vhezheni yapfuura) izvozvi hatina chikumbiro chakazvitsaurira, icho kune rumwe rutivi chakasiiwa chaizvo, kana maviri mafaera ekugadzirisa. Ndokunge, ivo vacharamba vachirira zvinoenderana nemamiriro akasarudzwa neiyo PS5 kwatiri uye isu tinofanirwa kutaura kuti bvunzo dzedu neKudaidzwa Kwebasa: Warzone uye Dhimoni Remake Remake zvabudirira zvachose.
Zvino zvasvika ndizvo bhatani «rinotarisa» rinotibvumidza kushandisa yakajeka nzira iyo inotora ruzha rwekunze kuburikidza nemakrofoni uye kuitazve kwatiri, kuti tirege kuzviparadzanisa zvachose.
Muchikamu chekuruboshwe nzeve pane mabhatani ese, kutanga nevhoriyamu, musanganiswa pakati pehurukuro yekuteerera nemutambo, simba rekuvhara / kudzima uye bhatani nyowani "mbeveve" iyo inoratidza mutsetse weorenji kana yaitwa uye izvo zvichizovhenekera orenji LED yeDualSense.
Tine mune idzi Sony Pulse 3D dos mamaikorofoni inosanganisirwa mune ese mahedhifoni, angangoita asingaonekwe asi ayo anotora zvakakwana izwi redu. Zvekare zvakare Sony yakwanisa kuzviita nemazvo uye tinogona kunzwikwa zvakakwana mumamiriro ese ezvinhu.
Iyo PlayStation 5 mushandisi interface inogamuchirawo mahedhifoni aya kuburikidza iwo ma icon ayo anozoratidzwa pachiratidziri achitizivisa zvese zvatinoita nemahedhifoni senge vhoriyamu, kusanganisa, kunyaradza maikorofoni ... nezvimwe. Sony yanyatso shandura iyo PS3 Pulse 5D chiitiko kuva chiitiko chakazara zvakakwana.
Iyi Pulse 3D inotipa ruzha rwakachena, rwakaringana pamitambo yemavhidhiyo uye nezwi re3D iro, kunyangwe hazvo risiri iro rakanakisa pamusika, rakabudirira kwazvo tichifunga nezve mutengo wechigadzirwa. Inonzwika zvirinani pane zvaungatarisira zvichibva mukugadzirwa kwayo.
Isu tiri, kubva mumaonero angu, akanakisa emhando-yemutengo imwe pamusika maererano nemahedhifoni e PS5. Izvo hazvidi chero mhando yekumisikidza, zvakanyatso kubatanidzwa neconsole uye ruzivo rwezvishongedzo pamwe chete nemutongi uye iyo DualSense chiteshi chechaiti chinonetsa kuenzanisa.
Zviripachena kuti hachisi chinhu chakachipa, tiri kuenda kumahedhifoni eanosvika zana maeuro, kunyangwe mutengo wayo usingatishamise kana tikazvienzanisa nedzimwe nzira dzePC kana mahedhifoni kuteerera mimhanzi. Naizvozvo, kana uchikwanisa kuzvitenga uye uri kuzoshandisa zvakanyanya kuPS5, ini ndinofunga ndiyo nzira yakakwana, unogona uvatenge mune IYI CHIDZIDZO pamutengo wakanaka
Kubatanidzwa kwakazara nePS5
Yakanaka mhando kurira
Yakareruka uye yakasununguka kwazvo kumisikidzwa
Chimwe chinhu "premium" chinoshaikwa
Kuzvimiririra kunogona kuve kwakakwira pamutengo iwoyo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Dhinda 3D, mahedhifoni ePS5 zvakare achinja zvakanyanya [Ongororo]